Ụlọ ụmụaka - iSearch
Ọtụtụ ndị nne na nna na-adịghị njikere maka ihe a: mgbe mama na-amalite ịkụ akwụ ya na mberede. Nke ahụ abụghị akụkọ ifo! Ọbụna ndị ọkà mmụta sayensị gosipụtara na banyere 5. Ụbọchị ime afọ na-eji mmuo a na-akpọkarị "ụlọ nwu". Dị ka anụ ọhịa, ụwa ndị a na-atụ anya na-eme mgbalị niile iji mee ka ụlọ dị mma dị ka o kwere mee maka ọmụmụ nke mkpụrụ.
Nke ahụ na-amalitekarị na-adịghị njọ. Enwere igbe egwu, ma eleghị anya, ebe ị na-apụghị ịfefe. Na tupu ị mara ya, ọ bụghị nanị na ọmụmụ ihe ahụ enyela ụlọ akwụkwọ ọhụrụ ahụ, ọ na-enwu ugbu a na ọmarịcha pastel shades!
Ugbu a ajụjụ nke ngwaọrụ ziri ezi dị. N'ihi na ime ụlọ ahụ ekwesịghị ịbụ naanị ihe dị mma, kama ọ bụ isi na-achọ ihe ndị dị mkpa. A ghaghị ịkwado ụlọ na-agbanwe agbanwe ka ihe niile dị mfe, na-ahapụghị ọnọdụ gị ma na-eburu nwata ahụ aka nchekwa. Ebe siri ike maka uwe na-agbanwe agbanwe kwesịrị ịdị nnọọ ka ịnweta dị ka ihe na-adịgide adịgide na ndị na-ede akwụkwọ ma na-echekwa ude. Ọbụna ihe mgbapụta nwere ike ịhụ ebe dị anya agaghị adị anya.
Iji mepụta ụlọ zuru ezu, ọtụtụ ịzụrụ dị mkpa. A na-etinye ụfọdụ ngwá ụlọ maka mkpa nke nwa ahụ. A na-agbanwe agbanwe na okpokoro. Ụfọdụ ndị na-ara ara ara na-ahụkwa na ọ dị mma ịchọta oche ma ọ bụ oche ihe n 'ime ụlọ iji mee ka nwa-aṅụ ara ehi dị ka ihe dị mfe. Enwere ike ịzụta ọtụtụ ngwongwo na nlekọta. A na-ewu ọtụtụ ngwá ụmụaka taa ka ha na-etolite site na nwa ruo mgbe ha na-eto eto. Ọtụtụ mgbe, tebụl na-agbanwe agbanwe nwere ike (na-agbanwe agbanwe na mpempe akwụkwọ na-agbanwe) dịka igwe-ehicha na-anọgide na-eji. Enwere ike ịgbatị ebe obibi akwa ma ọ bụ site na iwepụ akụkụ nke akwa ka na-eji dị ka akwa akwa. Site na tebụl dị mma, nke nwere ike itinye na bed nne na nna, e nwere ọbụna ụdị taa nke a pụrụ iji mee ihe n'ọtụtụ ụzọ. Na mgbakwunye na iji ya dị ka oche ụmụaka mara mma, a pụkwara iji ya dị ka oche dị elu ma ọ bụ ọbụna dị ka tebụl site n'ịgbanwe ma gbakwunye ihe ụfọdụ. Ya mere ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji jiri ngwá ọrụ ụmụaka tụnyere ọrụ ha tupu ịzụta ihe.
Ma, nhọrọ nke imewe kwesịrị ịnata nlebara anya. N'ihi na karịsịa mgbe ị na-ekpebi ụlọ akụrụngwa ka ị na-eto eto, ị kwesịrị ịṅa ntị na-enweghị atụ: a ga-ejikọta arịa ụlọ nke ọma, osisi siri ike ga-adịte aka, ma ọ dị oke ọnụ karịa ikpuchi. Ejiji mara mma ma ọ bụ ihe nkedo dị mma nwere ike ile anya n'ime ụlọ nwa, ma o yikarịrị ka ọ gaghị adabara afọ anọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye nwa gị ma ọ bụ ụlọ ụmụaka aka aka, ị ga-eji ọrụ mgbakwunye dị ka foto, akwụkwọ ozi osisi, akwa ígwè ma ọ bụ nkpu uwe, nke a ga-edochi n'enweghị mgbalị ọ bụla.
Na atụmanya nile, ọ dịkwa mma iji tụnyere ya ọzọ mgbe ị na-edezi akwụkwọ. Ị ga-achọta ọtụtụ ndụmọdụ bara uru na ndu anyị.